Eriri N'ogige Ngwá ụlọ Luxury Set Rope Outdoor Patio Furniture Sofa, N'ogbe N'èzí Furniture on TopChinaSupplier.com
Mbido ulo ngwaahịa Ezumike Chaise String Garden Furniture Luxury Set the Rope Outdoor Patio Furniture Sofa
String Garden Furniture Luxury Set the Rope Outdoor Patio Furniture Sofa
1 È US $ 98.18 / Set
Guangdong, China, Guangdong, China (Chile)
AHA Bali Single sofa
Ịdị No: TF-2004S
Nke L * W * H (cm) 78 * 91 * 72
ihe: Fgwè frame (1.5 + 2.0mm); Olefin eriri 6mm
Nha ịbụ: 9kg
akwụkwọ: SGS kwadoro
Ntinye ụlọ ọrụ:
Tanfly bụ ọkachamara na nrụpụta arịa ụlọ n'èzí, rụpụta yana ire ahịa.
Kemgbe ihe karịrị afọ asaa ị rụpụtara ihe eji emepụta ngwa ahịa n'èzí, anyị amalitela ịgbasawanye ụdị azụmaahịa anyị iji mejupụta online ahịa n'ime atụmatụ anyị dum.
Ọchịchọ anyị bụ iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa anyị site na iwepu ndị na-enweghị isi na nnyefe nke ngwaahịa anyị. Soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe bụ, anyị kwenyere, isi ihe na-eweta ngwaahịa dị mma na ịrụ ọrụ nke ọmaomume nal.
Anyị bụ ndị ụlọ ọrụ anyị lekwasịrị anya nke ọma. Nkwekorita anyi di nkpa bu inye ndi ahia anyi ihe ndi kachasi nma, odi nma ma di mfe ichikota, iji mee ihe.
Ngwa ụlọ anyị ọ bụla na-erite uru site na sleek, a tụlere ya nke ọma, ergonomic, imewe ọgbara ọhụrụ. All ngwaahịa na-rigorously nwalere n'ihi na àgwà na anyị nzukọ ntuziaka na-ahazi, maka mfe na ala nke iji. Classicdị anyị dị iche iche na nka a pụrụ ịdabere na ya ga-agbanwe oge na-agbanwe agbanwe yana yana iji ya eme ihe ruo ọtụtụ afọ.
Dịka onye ahịa anyị, ị ga - ejide n’aka na atụmanya gị, nchụso gị na nrọ gị na - akpali anyị isorontinually melite ogo ngwaahịa na ọrụ anyị.
Office nke Tanfly:
Tanfly nọchiri anya nọmba 1 na Google:
Ahịa Tanfly Nye overwa Niile:
Ndị ahịa Tanfly na-eleta
Ndị ọrụ na Tanfly ji nlezianya na ọrụ ha, nwunyentaneously arụ ọrụ mgbe ọrụ, (oge ọrụ: 8: 30-23: 30), nketa natiommụọ nal nke afọ 5,000 nke mba China na-arụsi ọrụ ike iji nweta.
Ihe osise dị n'okpuru ebe a na-egosi etu onye ahịa ahịa kevin na Tanfly si gbakọọ CBM nke arịa ụlọ.
Anyị tanfly nwere ọdịbendị ụlọ ọrụ anyị pụrụ iche:
Raara nye mmepe nke ogologo oge nke ime ụlọ na mmụọ nka (nke ịgbalịsi ike kacha mma).
Ndị ọrụ nwere ndụ ọgaranya na nke mara mma na Tanfly. Onye isi oche nke Tanfly bụ onye maara ihe ma nwee obi ọma.
Ndị ndu na Tanfly na-elekọta ana-agbakwunye ndụ ndị ọrụ ma na-ahazi ndị ọrụ iji gaa njem. N’uche ndị ọrụ, karịa ịsị na Tanfly bụ ụlọ ọrụ, ọ ka mma ịsị na Tanfly bụ ezinụlọ na-ekpo ọkụ.
oche sofa jakarta
nwoke na nwanyị ụlọ sofa
oche oche sofa
max ulo eji akwa sofa